ब्लडप्रेसर लो पानी खाने हो ? (स्वास्थ्य टिप्स) – Rajdhani Daily
ब्लडप्रेसर लो पानी खाने हो ? (स्वास्थ्य टिप्स)
मानिसका लागि उच्च तथा न्यून रक्तचाप दुवै खराब हुन् । यी दुवै शरीरका लागि खतरनाक हुन सक्छन् । लो र हाई ब्लड प्रेसर एकअर्कामा सम्बन्धित पनि छन् । एक अर्काका कारक पनि हुन सक्छन् । कहिलेकाहीँ शरीरमा रगत छिटोछिटो सञ्चालन हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ भने निकै ढिला पनि हुन जान्छ । छिटो हुनेलाई उच्च र ढिलो हुनेलाई न्यून रक्तचाप भनिन्छ ।
यदि तपाईं पनि यस्तैखाले ब्लडप्रेसरबाट पीडित हुनुहुन्छ भने निम्न घरेलु उपायहरू सतर्कताका साथ अपनाउनुहोस् । त्यसमा पनि ‘ब्लडप्रेसर लो’ छ भने यस्ता उपायहरू तपाईंका टिप्स हुन सक्छन् । यी उपायहरूले तपार्इंको गडबड भएको स्वास्थ्य ठीक वा सामान्य अवस्थामा ल्याउन सहयोग गर्छन् ।
यसमा सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको नुनको प्रयोग हो । नुन प्रत्यक्षभन्दा पनि पानीमा मिसाएर वा झोलिलो कुरा बनाएर सेवन गर्नु उत्तम हुन्छ । ब्लडप्रेसर लो अर्थात् न्यून रक्तचाप भएका लागि यो अति जरुरी छ । यस्ता मानिसहरूले परिवारका अन्य सदस्यहरूभन्दा बढी नुन खाने गर्नुपर्छ । यसले ब्लड प्रेसरलाई ठीक ठाँउमा ल्याउने काम गर्छ । हाई आउन थालेमा, आँखा बटारिन थालेमा वा अस्वाभाविक अल्छी लाग्न थालेमा एक गिलास पानीमा एक चम्चा नुन घोलेर तुरन्त खानुपर्छ ।
दोस्रो कुरा भनेको कफीको प्रयोगमा बानी ल्याउन हो । ब्लडप्रेसर बढी भएका मानिसले कफी कम पिउनुपर्छ । तर, कम प्रेसर भएकाहरूले कफी दैनिक पिएमा राम्रो हुन्छ । दिनहुँ कफी पिएमा यसले तपाईंको रक्तचापलाई बढाउन मद्दत गर्छ । यसमा पनि प्रयोग भएको त पानी नै हो ।
किसमिसले ब्लडप्रेसर बढाउन मद्दत गर्छ । मात्र १०÷१५ दाना किसमिसलाई पानीमा रातमा भिजाएर बिहान खाली पेटमा सेवन गरेमा प्रेसर बढाउँछ । यसमा पनि पानीको प्रयोग नै हो । भिजाएको पानी पिउन नभुल्नुहोस् ।
अर्को महŒवपूर्ण कुरो, तुलसीको पातको सेवन हो । दिनहुँ तीन÷चारवटा तुलसीको पात चपाएर खानुहोस् र पानी पिउनुहोस् । यसले न्यून रक्तचापलाई सामान्य बनाउँछ वा बढाउँछ ।
यसका साथै, कागती पानी र नुन पिउन नभुल्नुहोस् । यो घरेलु जीवन जल पनि हो । कागती पानीमा थोरै नुन र चिनी हालेर पिएमा कम रक्तचाप भएकाहरूलाई तुरन्त फाइदा पु¥याउँछ । यसको प्रयोगले शरीरमा शक्ति बढाउँछ र मृगौलाले पनि सही काम गर्छ ।
Tags: ब्लडप्रेसर लो पानी खाने हो ?